Shaqaalaynta - Wada-hawlgalayaasha Oregon-Gaajo-free
Kusoo biir Kooxdayada!
Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta waxay qiimeeyaan hibada gaarka ah iyo aragtiyaha kala duwan ee shaqaalaheenna iyo mutadawiciinta. Waxaan aaminsanahay in shaqaale kastaa uu si toos ah uga qaybqaato kobacayada iyo guushayada, waxaanu ku faanaa kooxdayada. Waxaan aaminsanahay in dhammaanteen aan sameyn karno isbeddel wanaagsan oo ku aaddan joojinta gaajada Oregon - taas oo ay ku jirto adiga! Fadlan tixgeli inaad ku biirto kooxdayada.
Qabanqaabiyaha Cadaalada Cuntada Bulshada
Hadda ma hayno boosas furan. Si aad u barato fursadaha shaqo, ku soo biir our liiska wararka e-news.
Hadda ma hayno boosas tabaruce ah oo furan, laakiin naga hubi Bog dhacdooyinka Wixii macluumaad dheeraad ah.
Fiiro gaar ah: Ma bixino tababaro aan mushahar lahayn. Waxaan aqbalnaa tababarayaal kaliya haddii aan awoodno inaan bixinno magdhow.
Tababarka Dhacdooyinka Jiilaalka (lacag la bixiyay)
Partners for Hunger-Free Oregon waa u doodaha gobolka oo dhan oo aan faa'iido doon ahayn oo ay hogaaminayaan guddi ka go'an iyo shaqaale xamaasad leh oo ku dhow 10 kuwaas oo soo dhaweynaya qiyamka sinnaanta, daacadnimada iyo wada shaqaynta kooxeed.
Waxaan aragnaa Oregon halkaas oo qof kastaa uu caafimaad qabo oo kobcayo, oo heli kara cunto la awoodi karo, nafaqo leh iyo dhaqan ku habboon. qiyamkayaga iyo shaqadeenu waxay udub dhexaad u tahay abuurista isbeddelo nidaamsan si loo dhammeeyo gaajada, oo ay ku jiraan qaybinta hantida, cuntada, iyo awoodda si siman. Waxaan hiigsaneynaa in aan meel dhigno shaqadeena si aan ula jaanqaadno dadaallada xoreynta caalamiga ah ee ka soo horjeeda midab-takoorka, ka soo horjeeda, iyo rabshadaha-diidka.